बैंकिङ सुरक्षामा प्रश्न
बैंकहरूले सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाएको दाबी गरे पनि मुुलुकमा एकपछि अर्को बंैकिङ अपराध सतहमा आएका छन् । पछिल्लो ३ महीनामा मात्रै नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा ठूला तीन बैंक चोरीका अपराध भएका छन् ।
यीमध्ये पछिल्लो पटकको चोरी अझ गम्भीर प्रकृतिको छ । जनता बैंक तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट किर्ते हस्ताक्षर गरी एक समूहले ३० लाख रुपैयाँ झिकेको छ । नक्कली चेकबुक बनाउनुका साथै हजारौं नागरिकका नागरिकता लगायतका कागजात सो समूहसँग भेटिनुले नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ सुरक्षाका सामान्य प्रक्रियामा समेत हेलचेक्र्याइँ गरेको पुष्टि हुन्छ ।
बैंकबाट फरकफरक तरीकाबाट रकम चोरी भइरहँदा पनि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध बैंकले भने हाम्रो प्रणाली सुरक्षित छ भनेर बनिबनाउ जवाफ दिने गरेका छन् । अपेक्षित गम्भीरता देखिएको छैन ।
कुनै व्यक्तिको सामान्य सूचनासमेत दिन नमिल्ने बैंकिङ प्रणालीमा एउटा व्यक्तिको चेकबुक अर्कै व्यक्तिलाई कसरी दिइयो ? आफ्नै खाताको रकम निकाल्न जाँदासमेत सही मिलेन भनेर रकम भुक्तानी दिन आनाकानी गर्ने बैंकले किर्ते हस्ताक्षर भएको चेकबाट कसरी भुक्तानी दियो ? सानो रकम भए पनि जुन तरीकाले बैंकमा ठगी गरिएको छ त्यो निकै गम्भीर प्रकृतिको छ ।
बैंकबाट फरक फरक तरीकाबाट रकम चोरी भइरहँदा पनि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध बैंकले भने हाम्रो प्रणाली सुरक्षित छ भनेर बनिबनाउ जवाफ दिने गरेका छन् । अपेक्षित गम्भीरता देखिएको छैन । अहिलेको घटनामा पनि केन्द्रीय बैंकबाट ‘सामान्य घटना’ र ‘निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित छ’ भन्ने बनिबनाउ प्रतिक्रिया आएको छ ।
नबिल बैंकको महेन्द्रनगर शाखाबाट २ करोड रुपैयाँ लुट्ने लुटेराहरू वर्षौं बित्दा पनि पक्राउ परेनन् । एनआईसी एशियामा भएको स्वीफ्ट ह्याकिङको घटनामा पनि कुनै कारबाही भएन । चिनियाँ ह्याकरहरूको समूहले स्वीच ह्याक गरी एटीएमबाट रकम लुटेको घटनापछि पनि केन्द्रीय बैंक तथा बैंकहरूले पाठ सिकेको देखिएन । उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर यस्ता चोरी अन्यत्र पनि भएका छन् भन्ने मानसिकताले गर्दा बैंकिङ सुरक्षामा बढी सक्रियता नदेखाइएको हुन सक्छ । त्यसपछि युजर नेम र पासवर्ड ह्याकिङ गरेर कृषि विकास बैंकबाट रकम चोरी गरियो । त्यस्तै कृषि विकास बैंकको स्वयम्भू शाखाका प्रमुखले पासवर्ड चोरी बैंकिङ सिस्टमकै दुरुपयोग गरी झन्डै ३४ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको फेला पर्‍यो । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा संलग्न आठजना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । फरक फरक प्रकृति यी अपराधले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र असुरक्षित रहेका पुष्टि गर्छ ।
कागजी प्रक्रियाबाट समेत बैंकबाट रकम चोरी हुनुको कारण कर्मचारीको कमजोरी वा बदमासी नहोला भन्न सकि“दैन । प्रहरीको अनुसन्धानबाट यो रहस्य खुल्ला । तर, बैंकहरूले शाखा विस्तार गर्दा तथा ग्राहकहरूको संख्या बढाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दा बंैकिङ अपराधको बाटो सहज बनेको देखिन्छ । बैंकहरूको आन्तरिक नियमन र सुरक्षा प्रणाली कमजोर भएर नै किर्ते सम्भव भएको हो ।
सरकारले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मुलुकभित्रै मोबाइल बैंकिङ र मोबाइल पेमेन्ट लोकप्रिय हु“दै गएको छ । यो पारदर्शी र सहज पनि मानिन्छ । तर, यसले बैंकिङ सुरक्षामा भने चुनौती थपेको छ । यस्तोमा नियामक निकायले बैंकहरूलाई सुरक्षा अडिट गर्न दिएको निर्देशन पालना भएको पाइ“दैन । बैंकहरूको मुनाफाको केही अंश बैंकिङ सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान गर्न खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, विदेशी सफ्टवेयर भएकाले सुरक्षित छ भनेर उनीहरू ढुक्क भएका देखिन्छन् र थप अनुसन्धान गरेको देखिँदैन ।
बैंक विश्वासको कारोबार हो । निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित छैन भन्ने शंका लागेमा बैंकहरूबाट रकम निकाल्न शुरू हुन्छ । यसो भए मुलुक ठूलो संकटमा फस्न सक्छ । यस्तोमा सर्वसाधारणको अर्बौं रकम सुरक्षित राख्न नियामक निकायले विशेष निर्देशन दिनु आवश्यक देखिन्छ भने बैंकहरूले पनि सुरक्षाका लागि गम्भीर बन्नैपर्ने अवस्था आएको छ ।